MADAGASIKARA – Mba mierikere ihany !!!! | Tsimok'i Gasikara
← MADAGASCAR – Graves révélations sur les rôles joués par les « karanas » lors des élections de 2013.
Avec une nouvelle agence dédiée, le Zimbabwe veut conquérir l’espace →
Avy amin’ny namana iray ary ampitaina amintsika mpamaky rehetra satria mafonja sy milaza ireo zava-misy marina andavanandro ao amin’ny Firenentsika. Ho aiza ihany ity tanintsika ity e? Isaorana azy mialoha.
Iaraha mahalala ALOHA fa tena mafy ity fiainana indray mitoraka ity an !!!Tsy Mbola nisy ohatr’ity marina ! Ela nihinanan-kena isika ity marina ka tojo ny tena zavatra ! Isika ve no donto sa dia ahoana loatra ??
Ny fitadiavana efa tsizarizary, ny fiariana toa ny manana ihany no ambinina, ny tsy manana moa dia variana mifampitsikera sy mifampialona, Rafanja moa dia tsy hain-kianteherana , na jiro na rano misondrotra foana fa hampifilaina. Ny tena mahasorena dia ny tsy maty manota sy ny mpangalatra indray izao no tompon’ny laka sy manana ny pouvoir !!
Misy moa dia ankarihary tsotra izao , dia efa tsy menatra intsony ny sasany mampirevy anao amin’ny haro-paosy nataony taminao, ny vilany halatra tao aminao ihany izao no hanendasany tsaky hampirevena anao! Loza fa misy aza ny fandrinanao ihany zao no hanendasany ny vadinao !! Mampalahelo an !!
Dia efa tsy milamina intsony e! Fiainana dangodango izao no miainga ! Hatrany ambany indrindra ka hatrany amin’ny HCC izao dia samy tsy misy manara-dalàna ka ahoana moa no hisian’ny tany tan-dalàna !! Ny governemanta moa io dia hiaraha mahita io , tsy ahy tsy anao fa mbola an’ny manam-bola sy tompon’ny fahefana ! Dia samy manaiky !! Misy farany io hoy aho ka tandremo tratra farany eo !!
Efa mby ankoditra re marina ny vokatry ny mosavy nataon’olona iray eto amintsika ity e! Hita eny ho eny sy amin’ny ankamaroan’ny Malagasy ety ivelany mihitsy ny voka-dratsiny fa raha tsy miteny irery ny sasany dia ao ny toa lasamborona, misy moa dia mivanitika hoazy tsy hita HOE ahoana. IZANY moa tsy dia maninona fa raha ny lako tampoka tsy ahoan-tsy ahoana nahazo ity renim-pianakaviana iray dia tena nampalahelo, ka mbà mierikerika ihany ray olona fa gravy a!! Maratraratra fahatany !!
Publié le 13 juillet 2018, dans AFRIQUE, Madagasikara - Crise, et tagué crise, HVM, Insécurité, pauvreté. Bookmarquez ce permalien.	Poster un commentaire.